ညစ်ညမ်းသောခေါင်းကိုက်ခြင်း (2017) - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညူးစေသည်
လက်တွေ့ Neurology နှင့် Neurosurgery
Volume ကို 164ဇန်နဝါရီလ 2018, စာမျက်နှာများ 11-13
ဝေ-HsiChen ကabKuo ကယန်းChen ကbHsin-လိန်းယဉ်c
လိင်ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ် masturbatory လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်အဆိုပါခေါင်းကိုက်ခြင်းတစ်ဦးကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုလက်တွေ့ entity ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်အနိုင်နိုင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိကျတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာများကို၏ညစ်ညမ်းမှမဟုတ်အခြားအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် nonsexual လုပ်ရပ်သာပိုင် preorgasmic ခေါင်းကိုက်ခံစားခဲ့ရသူတစ်ဦးလုလင်ကိုသတင်းပို့ပါ။ လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦး antecedent activation နှင့် vasoconstriction နာကျင်မှုစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါးစပ် indomethacin သာသာထိုးထိုးနာကျင်မှုတားဆီး။ ထို့ကြောင့်, ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related ခေါင်းကိုက်ရောဂါကနေကွဲပြားတဲ့ပုံမှန်ခေါင်းကိုက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်နိုးထ-ဖျန်ဖြေ cerebrovascular ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် uncoupling visuoneural မှ dysregulation အကျိုးဆက်အဆိုပြုထားသည်။ ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်အဖြစ်လူဦးရေအတွက်လျှော့တွက်မည်အကြောင်း, နာကျင်မှု-လူသတ်သမား သုံးရင်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားမှု mask လိမ့်မည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (HSA) နဲ့ဆက်စပ်ခေါင်းကိုက်လိင်-related ခေါင်းကိုက်ရောဂါတစ်ကြယ်ပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်အောက်ပါ, ဦးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် ။ ယခုတိုင်အောင်, ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းခံရသတင်းပို့သူတစ်ဦးတည်းသာလူတဦးလည်းမရှိ ။ ဤနေရာတွင်ကျနော်တို့နှစ်ခုဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူရှုပ်ထွေးနေတဲ့လိင်-တိကျတဲ့နာကျင်မှုထောကျပံ့ပေးတော်မူသောအတွက်အခြားလူနာသတင်းပို့ cerebrovascular dysregulation ။
2 ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ
အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး သည် holocranial တုန်ခါခြင်း၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အတွင်းနာကျင်မှုစတင်ခဲ့သည်။ orgasm မပါဘဲပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ လူနာသည်ရပ်တန့်သည့် အချိန်မှစ၍ နာကျင်မှုမှာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ လူနာကငြင်းဆိုသည် auraနာကျင်မှုကာလအတွင်းဆက်စပ်လက္ခဏာ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်္ဂါရပ်သို့မဟုတ်သွေးဖိအားမြင့်။ ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာ hotness အဖြစ်သို့သော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်လိင်စိတ်နိုးထ (SA), တုန်လှုပ်သော, လျင်မြန်စွာအသက်ရှူခြောက်သွေ့လည်ချောင်းနှင့် / သို့မဟုတ် penile တင်းမာ, နာကျင်မှုစတင်ခြင်းရှေ့ပြေး။ အဆိုပါအညွှန်းကိန်းနာကျင်မှုသာညစ်ညမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းပြန်ခေါ်, Non-ခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ကြားနေပစ္စည်းများပါဝင်သောဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်တော်ကိုနှိုးဆော်ပေမယ့်မခံခဲ့ရ, တစ်ကိုယ်တော် / ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးတည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပူးပေါင်း, လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် partner ၏ဝတ်လစ်စလစ်ခန္ဓာကိုယ်, လိင်ဆက်ဆံမှုအသံသည်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှုတ်ကြားနာ ဖိတ်ခေါ်, ဒါမှမဟုတ် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွိုးစားအားထုလှုပ်ရှားမှု။ ခေါ်ဆောင်သွားသောဗီဒီယိုများ၏ content နှင့် ပတ်သက်. များတွင်လိင်ကွဲ orgy ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအနီးကပ်တက်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးနှိုးဆွခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြင်းထန်မှုတဦးတည်း-to-တဦးတည်းလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုများအတွက်အလယ်အလတ်ခဲ့ လိင်တူချစ်သူ လုပ်ရပ်နဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ။ အထီးလိင်တူဆက်ဆံလုပ်ရပ်ကိုမဆိုနာကျင်မှုနှိုးဆော်ခြင်းမပြုခဲ့။ နာကျင်မှုမျိုးနွယ်စုအတွက်သို့မဟုတ်ပါဝင်မှု၏စိတ်ကူးယဉ်အောက်မှာကွာခြားချက်မရှိဘဲကျကွီးရှယျအိုမြားထက်အသက်ငယ်မင်းသမီးမှအားကောင်းခဲ့သည်။
လူနာ5နှစ်ပေါင်းလိင်ကွဲများနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အိမ်ထောင်ရေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးဟာကျေနပ်ခြင်း, မည်သည့်ပုံစံ၌ကျူးလွန်အထီး-to-အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖို့ကိုငြင်းပယ် extradyadic ကိစ္စသို့မဟုတ်လိင်မတိုင်မီစော်ကား။ လူနာမကြာသေးမီ psychosexual ရောဂါ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါ, ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ craniofacial ဒဏ်ရာ, ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် နှင့်အခြားမူလတန်းခေါင်းကိုက်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်၏စားသုံးမှု တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ်လိင်-မြှင့်တင်ရန်တ္ထုများသို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းများနှင့်မရောက်မီမည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူး။ အရက်သောက်သုံး 20 နှစ်ပေါင်းထက် 10 တစ်ပတ်ကို gm လျော့နည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kinsey စကေးဂိုးသွင်း0နှင့်အမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးလိင်အထောက်အထားစကေး2ရမှတ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ အာရုံကြောနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲပုံမှန်မဟုတ်သောတွေ့ရှိချက်ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါဘူး။ အသွေးသည်ဓာတုဗေဒ, serology နှင့် testosterone ဟော်မုန်း ရည်ညွှန်းအကွာအဝေးအတွင်းရှိကြ၏။ ဦးခေါင်း သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့် angiography (နာကျင်မှု-အခမဲ့ကာလ၌, ယင်းကဲ့သို့ tonsillar herniation အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတွေ့ရှိချက်, ထုတ်ဖော်မပြုခဲ့သဖန်းသီး။ 1က) ။ Electroencephalogram alpha နောက်ခံ။ 2.0 MHz transcranial အရောင် doppler ပိုမိုမြင့်မားသောထောင့်မှန်ဆုံးအမြင့်ဆုံး (ညာဘက်ခြမ်း ၇၄.၁ စင်တီမီတာ / စက္ကန့်နှင့်လက်ဝဲဘက် ၁၂၂ စင်တီမီတာ / စက္ကန့်၊ ခြားနားချက် ၄၇.၉ စင်တီမီတာ / စက္ကန့်) နှင့် ဦး နှောက်သွေးအလျင် (ညာဘက်အခြမ်း ၄၉.၀ စင်တီမီတာ / စက္ကန့်) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ vs လက်ဝဲဘက် 80 စင်တီမီတာ / စက္ကန့်; ဘယ်ဘက်မှာခြားနားချက် 31 စင်တီမီတာ / စက္ကန့်) အလယ်တန်းနှောက်သွေးလွှတ်ကြော (နာကျင်မှုစဉ်အတွင်းသဖန်းသီး။ 1ယင်းမှတဆင့် B နဲ့ C က) ယာယီအရိုး acoustic ပြတင်းပေါက်။ အတွက်အလျင် , ဘုံပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ carotid သွေးလွှတ်ကြော, လည်းပဲ ဦးနှောက်သွေးလွှတ်ကြော posteriorပုံမှန်မဟုတ်သောမပြောင်းခဲ့ပါဘူး နာကျင်မှုကင်းသောကာလတွင်အလယ်နှောက်သွေးလွှတ်ကြောတွင်အမြင့်ဆုံးနှုန်းသည် ၇၅-၈၅ စင်တီမီတာ / စရှိသည်။ အကြောင်းကြားပြီးနောက်လူနာယူရန်သဘောတူခဲ့သည် indomethacin ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမကြည့်မီ ၁၅ မိနစ်တွင် ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ်နှင့်နာကျင်မှုဖြစ်ပွားခြင်းကိုအောင်မြင်စွာတားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ စိတ်ရောဂါတီထွင်မှုကိုအကြံပြုခဲ့ပါဘူး စွဲလမ်းစေရောဂါ အင်တာနက်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်။
HSA ၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့မှုမှာ ၁% ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက Anand & Dhikav  ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်း၏ပထမဦးဆုံးတရားဝင်လူနာကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ဟာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနာကျင်မှုခန့်မှန်းသုံးသပ်သည် trigeminovascular တစ်ဦးမွငျ့မားပျံ့နှံ့အပေါ်အခွခေံအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကြွက်သားကျုံ့, ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် HSA နှင့်သူတို့၏စိတ်ရှည်အတွက် preorgasmic တိုက်ခိုက်။ သို့သော်သူတို့၏စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ငါတို့ဥစ်စာခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သို့မဟုတ် trigeminovascular ခေါင်းကိုက်တွေ့ကြုံခံစားကြဘူးနဲ့ preorgasmic နာကျင်မှုကြွက်သားကျုံ့ဖို့ထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာများတွင်နှစ်ခုဝတ္ထုဒီပိုင်ထိုက်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းတွေ့ရှိချက်, အမည်ရ, SA activation မတိုင်မီရှိပါတယ်နှင့် vasoconstriction နာကျင်မှုကာလအတွင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကဲ့သို့သောလုပ် SA ကွန်ယက်ပတျသကျတဲ့လိင်-တိကျတဲ့နာကျင်မှု, ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်အကြံပြု hypothalamus အရာစည်းမျဉ်းများ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု.
In အညွှန်းကိန်းလူနာ, နာကျင်မှုအဓိကအားနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုလုပ် SA ၏ပြင်းအားဖို့အပြိုင်ဖြစ်ပါသည်, ဖွယ်ရှိတံခါးစောင့် arousal activation implicating နှင့် modulator တွေကို ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် activation ၏ပြင်းအားထိုကဲ့သို့သောလိင်, အသက်, ၏အဆင့်အဖြစ်အချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲပေါ်မူတည် လိင်ဟော်မုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့် mode ကို။ လိင်ကွဲလုပ်ရပ်များမှတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိုမိုမြင့်မား activation, အညွှန်းကိန်းလူနာထောက်ခံမှုအတွက် Self-သတ္တုများပုံသွန်းနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမင်းသမီး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့် preference ကိုပြုလုပ်  နှင့်ပါဝင်မှု၏စိတ်ကူးယဉ်  ထို့အပြင်မြှင့်လုပ်ဆောင်သို့မဟုတျသူ၏လုပ် SA အား။ စိတ်ဝင်စားစရာနာကျင်မှုညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းသော်လည်းမညွှန်းကိန်းလူနာတခြား Real-ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ SA မှသာတိကျသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွအေနအေအလားတူအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွ၏ရှိနေသော်လည်းအဆိုပါညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အခြား HSA အကြားရှိရင်းစွဲတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခေါ်ဆောင်သွား signal ကိုလမ်းကြောင်းနှင့်နာကျင်မှုယန္တရားအကြံပြုထားသည်။
နာကျင်မှုစဉ်အတွင်းတစ်ခုအချိုးမညီပိုမိုမြင့်မားထောင့်-တညျ့နှောက်အသှေးကိုအလျင်လုပ် SA-ဖျန်ဖြေခိုငျလုံမှုမရှိ cerebrovascular အညွှန်းကိန်းလူနာအတွက်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သမျှအရင်းအမြစ်ဖြစ် dysregulation ။ increment ၏ပုံစံမဖြစ်နိုင် migraineurs သို့မဟုတ်နာကျင်ခံစားမှုထဲမှာအမြင်အာရုံ Non-ခေါ်ဆောင်သွားဆွ, အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ဆွဖို့ပြောပြတယ်။ အဲဒီအစား, ကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, focal vasoconstriction နှင့်သဟဇာတဖြစ် နောက်ပြန်လှည်နှောက် vasoconstriction syndrome ရောဂါ။ တကယ်တော့, dysregulatory vasoconstriction ရံဖန်ရံခါ HSA လူနာ preorgasmic ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်  ငါတို့နှင့်ဆင်တူ။ အတူတူယူ, ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ SA-mediated cerebrovascular dysregulation ခေါ်ဆောင်သွားနှိုးဆွဖို့ visuoneural uncoupling ကနေရလဒ်အဆိုပြုထားသည်။ သို့သော်လည်းဤကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှစိတ်ဖိစီးမှု, အရှက်ကွဲခြင်း, အပြစ်ရှိသို့မဟုတ်အခြားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု, ကဲ့သို့သောအခြားအချက်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုလိုလားလားတုန့်ပြန် indomethacin အခြားအ indomethacin တုံ့ပြန်မှုခေါင်းကိုက် syndrome တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် ။ Indomethacin ရံဖန်ရံခါငါတို့ဆင်တူ HSA ၏ preorgasmic နှင့် orgasm အမျိုးအစားများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ။ ၎င်း၏ pharmacological ယန္တရားအားဖြင့်ရောင်ရမ်းနှိမ်နင်းရန် postulated ဖြစ်ပါတယ် ယှဉ်ပြိုင်မှုတားစီး ထိုအပေါ် cyclo-oxygenase 1 နှင့် 2, phospholipase A2, ဒါမှမဟုတ် gluthation က S-transferase ။ ယခင်ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်လူနာများတွင်နာကျင်မှုကစိတ်သက်သာရာရခဲ့သည် နဲ့ Ibuprofen နှင့် paracetamol combo ။ ထို့ကြောင့်, indomethacin သို့မဟုတ်နဲ့ Ibuprofen ၏တိုတောင်းသော-ချေါ prophylaxis ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ခြင်းအဘို့အအကြံပြုသည်။
ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှငျ့ပတျသကျတဲ့ပုံမှန်ခေါင်းကိုက်ရောဂါနှင့်အခြား HSA ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာလုပ် SA-အာမခံနှင့်အတူ visuoneural uncoupling ကနေဖြစ်ပေါ်ဖို့အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် cerebrovascular dysregulation ။ အတူကြိုတင်ကာကွယ်ကုသမှု indomethacin အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းခေါင်းကိုက်အဖြစ်သတိပေးရပါမည် vasomotor ပြောင်းလဲမှုကိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ယေဘုယျလူဦးရေအတွက်လျှော့တွက်မည်အကြောင်း, နာကျင်မှု-လူသတ်သမား သုံးရင်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားမှု mask လိမ့်မည်။
ဒီလေ့လာမှုကသည် Chang Gung ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းမှ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (Code ကိုအရေအတွက်အား 201700247B0) ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
WH Chen က MY Chu, YC လင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, function ကိုများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု: စာပေတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
Adv ။ လိင်။ Med ။ ,7(2017), စစ။ 65-81
KS Anand, V. Dhikavညစ်ညမ်းအသုံးပြုသွေးဆောင်ခေါင်းကိုက်
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 41 (2012), p ။ 1077
အီး Janssen, ဃလက်သမား,, CA ဂရေဟမ်လိင်သုတေသနအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းရုပ်ရှင်: ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင် preference ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှု
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 32 (2003), စစ။ 243-251
MM Valença, LP သို့ Andrade-Valença,, CA Bordini, et al ။နောက်ပြန်လှည်နှောက် vasoconstriction မှစွပ်စွဲ Thunderclap ခေါင်းကိုက်: အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
ဂျေခေါင်းကိုက်ခြင်းနာကျင်မှု,9(2008), စစ။ 277-288
EC အ Bordini,, CA Bordini, YW Woldeamanuel, et al ။Indomethacin တုံ့ပြန်မှုခေါင်းကိုက်: 81 ၏ရေကူးကန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဝေဖန်အကဲဖြတ်နှင့်အတူပြည့်စုံစေ့စပ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုလက်တွေ့လေ့လာမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
ခေါင်းကိုက်ခြင်း, 56 (2016), စစ။ 422-435